छोराछोरीलाई ईश्वरको बारेमा कसरी सिकाउन सकिन्छ? | बाइबल प्रश्नहरूको जवाफ
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उङ्गाबेरे उन्डुबेली उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसी कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ डच डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) मराठी मल्यालम माम माया मालागासी माल्टिज मिहे मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा वायुनाइकी वारे-वारे शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन
छोराछोरीले कसरी ईश्वरलाई माया गर्न सिक्न सक्छन्‌?
सृष्टिका कुराहरूबारे बताएर ईश्वरलाई चिन्न र माया गर्न छोराछोरीलाई सिकाउनुहोस्
छोराछोरीले ईश्वर वास्तवमै हुनुहुन्छ र तिनीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको ठोस प्रमाण पाएमा मात्र ईश्वरलाई माया गर्न सिक्नेछन्‌। यसो गर्न तिनीहरूले ईश्वरलाई चिन्नुपर्छ। (१ यूहन्ना ४:८) उदाहरणको लागि, तिनीहरूले यी प्रश्नहरूको जवाफ थाह पाउनु आवश्यक छ: ईश्वरले कुन उद्देश्यले मानिस सृष्टि गर्नुभयो? ईश्वरले किन दुःखकष्ट हटाउनुहुन्न? ईश्वरले भविष्यमा मानिसहरूका लागि के गर्नुहुनेछ?—फिलिप्पी १:९ पढ्नुहोस्।
ईश्वरलाई माया गर्न छोराछोरीलाई सिकाउने हो भने पहिला तपाईं आफैले उहाँलाई माया गरेको देखाउनु आवश्यक छ। यसो गर्नुभयो भने तिनीहरूले तपाईंको उदाहरण अनुकरण गर्नेछन्‌।—व्यवस्था ६:५-७; हितोपदेश २२:६ पढ्नुहोस्।
तपाईं कसरी छोराछोरीको मनसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ?
ईश्वरको वचन शक्तिशाली छ। (हिब्रू ४:१२) त्यसैले आफ्ना छोराछोरीलाई ईश्वरको वचनका मुख्य-मुख्य शिक्षाहरू बुझ्न मदत गर्नुहोस्। येशूले मानिसहरूको मनसम्म पुग्न प्रश्न सोध्नुभयो, तिनीहरूको कुरा ध्यान दिएर सुन्नुभयो र शास्त्रपदको व्याख्या गर्नुभयो। छोराछोरीको मनसम्म पुग्न तपाईंले येशूको सिकाउने तरिका अनुकरण गर्न सक्नुहुन्छ।—लूका २४:१५-१९, २७, ३२ पढ्नुहोस्।
साथै ईश्वरले कसरी मानिसहरूसित व्यवहार गर्नुहुन्छ भनेर देखाउने बाइबल विवरणहरूबाट पनि छोराछोरीले ईश्वरलाई चिन्न र माया गर्न सिक्नेछन्‌। यसै उद्देश्यको लागि तयार पारिएका प्रकाशनहरू www.jw.org /ne मा उपलब्ध छ।—२ तिमोथी ३:१६ पढ्नुहोस्।
यहोवाको साथी बनौं
कार्टुन, गीत र अरू सामग्रीले केटाकेटीलाई परमेश्‍वरलाई खुसी बनाउन सिकाउँछ।
मेरो बाइबल पाठ